Iindaba-Uhlalutyo lobuchule betekhnoloji ye-FTTH
Uhlalutyo lobuchule betekhnoloji ye-FTTH
Ngokwedatha efanelekileyo, umyinge wabasebenzisi be-broadband be-FTTH / FTTP / FTTB iya kufikelela kuma-59% ngo-2025. Iinkcukacha ezinikezelwa yinkampani yophando lweemarike iPoject Topic ibonisa ukuba olu phuhliso luza kuba li-11% ngaphezulu kunangoku.
IPoint Topic iqikelela ukuba kuzakubakho i-1.2 yezigidigidi zabasebenzisi be-broadband kwihlabathi liphela ngowama-2025. Kwiminyaka emibini yokuqala, inani elipheleleyo labasebenzisi be-broadband kwihlabathi liphela lingaphaya kwe-1 billion.
Malunga ne-89% yaba basebenzisi bakwiimarike ezingama-30 eziphezulu kwihlabathi liphela. Kwezi marike, i-FTTH kunye neetekhnoloji ezinxulumene nazo ziya kuthi ikakhulu zibambe isabelo sentengiso kwi-xDSL, kwaye isabelo sentengiso seXDSL sizokwehla ukusuka kwi-19% ukuya kwi-9% ngexesha lesimo sezulu. Nangona inani labasebenzisi befayibha kwisakhiwo (i-FTTC) kunye ne-VDSL kunye ne-DOCSIS esekwe kwi-hybrid fiber / coaxial cable (HFC) kufuneka inyuke ngexesha lokuxelwa kwangaphambili, isabelo sentengiso siza kuhlala sizinzile. Phakathi kwabo, i-FTTC iya kwenza i-akhawunti malunga ne-12% yenani lilonke lonxibelelwano, kunye ne-HFC iya kuba ne-19%.
Ukuvela kwe-5G kufuneka kuthintele usetyenziso olusisigxina lwebhendi ebanzi ngexesha eliqikelelweyo. Ngaphambi kokuba i-5G isetyenziswe ngokwenyani, kusenzima ukuqikelela ukuba ingakanani imarike eya kuchaphazeleka.
Eli nqaku liza kuthelekisa itekhnoloji yokungena ye-Passive Optical Network (PON) kunye ne-Active Optical Network (AON) esekwe kwiimpawu zoluntu oluhlala kwilizwe lam, kwaye lihlalutye izibonelelo kunye nokungalunganga kwesicelo sayo kwiindawo zokuhlala zase China. , Ngokucacisa iingxaki ezininzi ezibalaseleyo ekusetyenzisweni kwetekhnoloji yokufikelela ye-FTTH kwizithili zokuhlala kwilizwe lam, ingxoxo emfutshane malunga nezicwangciso ezifanelekileyo zelizwe lam zokuphuhlisa itekhnoloji yesicelo se-FTTH.
1. Iimpawu zentengiso ekujolise kuyo yelizwe lam
Okwangoku, eyona ntengiso kujoliswe kuyo ye-FTTH e-China ngokungathandabuzekiyo ngabahlali beendawo zokuhlala kwiidolophu ezinkulu, eziphakathi nezincinci. Iindawo zokuhlala zasezidolophini zihlala zihlala kwigadi yokuhlala. Iimpawu zabo ezibalaseleyo zezi: uxinano oluphezulu lwamakhaya. Iindawo zokuhlala igadi enye zihlala ngokubanzi zinabahlali abangama-500-3000, kwaye ezinye zide zibe ngamashumi amawaka emizi; Iindawo zokuhlala (kubandakanya izakhiwo zorhwebo) zixhotyiswe ngokubanzi ngamagumbi ezixhobo zonxibelelwano ukufakela izixhobo zonxibelelwano kunye nokunikezelwa kwemigca kuluntu lonke. Oluqwalaselo luyafuneka kubasebenzisi bonxibelelwano ukuze bakhuphisane kunye nokudibanisa iinkonzo zonxibelelwano ezininzi. Umgama ukusuka kwigumbi lekhompyuter ukuya kumsebenzisi ngokubanzi ungaphantsi kwe-1km; Abasebenzisi be-telecom abakhulu kunye nabasebenzisi be-TV ye-cable ngokubanzi babeka amanani asisiseko (ngesiqhelo ii-4 ukuya kwi-12 cores) iintambo ezibonakalayo kumagumbi ekhompyuter eendawo zokuhlala okanye izakhiwo zorhwebo; unxibelelwano lwendawo yokuhlala kunye nokufikelela kweCATV kuluntu Izixhobo zonxibelelwano zeekhebula zezomqhubi ngamnye. Olunye uphawu kwintengiso ekujoliswe kuyo yelizwe lam ye-FTTH bubukho bezithintelo kushishino ekuboneleleni ngeenkonzo zonxibelelwano: abaqhubi beefowuni abavumelekanga ukuba basebenzise iinkonzo ze-CATV, kwaye le meko ayinakuguqulwa kangangexesha elithile kwixesha elizayo.
2. Ukukhethwa kweTekhnoloji yoFikelelo kwi-FTTH kwilizwe lam
1) Iingxaki ezijamelene nothungelwano lwamehlo (PON) kwizicelo ze-FTTH kwilizwe lam
Umzobo 1 ubonakalisa ubume benethiwekhi kunye nokusasazwa kwenethiwekhi eyi-passive optical network (Passive Optical Network-PON). Ezona mpawu ziphambili zezi: Ngokufutshane kangangoko kunokwenzeka kwiyunithi yenethiwekhi ye-optical (i-Optical Network Unit -— ONU) kwicala lomsebenzisi. Umgama phakathi kwe-OLT kunye ne-ONU ulingana nomgama phakathi kwegumbi lekhomputha lomnxibelelanisi womnxeba kunye nomsebenzisi, ofana nomgama wangoku wokufikelela womnxeba osisigxina, oziikhilomitha ezininzi ngokubanzi, kwaye iSplitter ngokubanzi sishumi leemitha ukuya amakhulu eemitha kude ne-ONU. Olu lwakhiwo kunye nolwakhiwo lwe-PON lubalaselisa izibonelelo ze-PON: inethiwekhi yonke ukusuka kwigumbi lekhompyuter eliphakathi ukuya kumsebenzisi yinethiwekhi yokungena; isixa esikhulu semithombo yefayibha ye-fiber optic ukusuka kwigumbi lekhompyuter ukuya kumsebenzisi iyagcinwa; kuba inye-ukuya-kuninzi, inani lezixhobo kwigumbi lekhompyuter eliphakathi liyancitshiswa kunye neSikali, kunciphisa inani lezintambo kwigumbi lekhompyuter.
Ubume obufanelekileyo benethiwekhi yokungena (PON) kwindawo yokuhlala: i-OLT ibekwe kwigumbi lekhompyuter lomqhubi wefowuni. Ngokomgaqo wokuba iSplitter sikufutshane nomsebenzisi kangangoko kunokwenzeka, iSplitter ibekwe kwibhokisi yokuhambisa esemgangathweni. Ngokucacileyo, olu lwakhiwo lufanelekileyo lunokuqaqambisa izibonelelo ze-PON, kodwa ngokuqinisekileyo ziya kuzisa ezi ngxaki zilandelayo: Okokuqala, intambo yenombolo yefayibha ephezulu efunekayo ukusuka kwigumbi lekhompyuter ukuya kwindawo yokuhlala, ezinjengeendawo zokuhlala eziyi-3000. , kubalwa kumyinge wesebe we-1: 16, Phantse i-200-core fiber fiber cable iyafuneka, kodwa okwangoku zii-4-12 cores kuphela, kunzima kakhulu ukonyusa ukubekwa kwentambo yokubonakalayo; Okwesibini, abasebenzisi abanakho ukukhetha ngokukhululekileyo umqhubi, banokukhetha kuphela inkonzo ebonelelwa ngumnxibelelanisi omnye wonxibelelwano, kwaye akunakuphepheka ukuba umqhubi omnye azilawule yedwa Imeko yeshishini ayihambelani kukhuphiswano lwabasebenzisi abaninzi, kwaye umdla wabasebenzisi awunakuba ikhuselwe ngokufanelekileyo. Okwesithathu, abasasazi bezinto ezibonakalayo ababekwa kwibhokisi yokuhambisa esemgangathweni iya kubangela ukuba iindawo zokuhambisa zisasazeke kakhulu, zikhokelela kulwabiwo olunzima kakhulu, ulondolozo kunye nolawulo. Phantse ayinakwenzeka; Okwesine, akunakwenzeka ukuphucula ukusetyenziswa kwezixhobo zenethiwekhi kunye namazibuko okufikelela, kuba ngaphakathi kokugubungela i-PON enye, inqanaba lokufikelela komsebenzisi kunzima ukufikelela kwi-100%.
Ubume bokwenyani benethiwekhi yokungena (PON) kwindawo yokuhlala: i-OLT kunye ne-Splitter zombini zibekwe kwigumbi lekhompyuter lendawo yokuhlala. Izinto eziluncedo kulwakhiwo lokwenyani zezi: ziintambo zombane ezisezantsi ezisezantsi kuphela ezifunekayo ukusuka kwigumbi lekhomputha eliphakathi ukuya kwindawo yokuhlala, kwaye izixhobo ezikhoyo zeekhebula ezibonakalayo zinokuhlangabezana neemfuno; Imigca yokungena kuyo yonke indawo yokuhlala ifakwe kwigumbi lekhompyuter lendawo yokuhlala, evumela abasebenzisi ukuba bakhethe ngokukhululekileyo abaqhubi beefowuni ezahlukeneyo. Kubasebenzisi be-telecom, inethiwekhi kulula kakhulu ukuyabela, ukugcina nokulawula; kuba izixhobo zokufikelela kunye neepaneli zepali zikwigumbi elinye lesisele, ngaphandle kwamathandabuzo ziya kuphucula ukusetyenziswa kwezixhobo, kwaye isixhobo sokufikelela sinokwandiswa ngokuthe chu ngokwanda kwenani labasebenzisi. . Nangona kunjalo, olu lwakhiwo luyinyani lukwanazo neentsilelo zalo ezicacileyo: Okokuqala, ubume benethiwekhi yokulahla i-PON lolona ncedo lukhulu kuthungelwano, kunye negumbi lekhompyutha eliphakathi kwinethiwekhi yomsebenzisi iseyinethiwekhi esebenzayo; okwesibini, ayizisindisi izixhobo zefiber optic ngenxa yePON; , Izixhobo ze-PON zinendleko eziphezulu kunye nolwakhiwo lwenethiwekhi oluntsonkothileyo.
Isishwankathelo, i-PON inamacala amabini aphikisanayo kwisicelo se-FTTH seendawo zokuhlala: Ngokwendlela efanelekileyo yenethiwekhi kunye nolwakhiwo lwe-PON, ngokuqinisekileyo inokudlala kwimidlalo yayo: inethiwekhi yonke ukusuka kwigumbi lekhompyuter ukuya kumsebenzisi uthungelwano lwentetho, olugcina uninzi lwegumbi eliphakathi lekhompyuter Kwizixhobo zefayibha ye-fiber optic yomsebenzisi, inani kunye nobungakanani bezixhobo kwigumbi lekhompyuter zenziwe lula; Nangona kunjalo, ikwazisa phantse iziphene ezingamkelekanga: ukwanda okukhulu ekubekweni kwemigca ye-fiber optic cable iyafuneka; iindawo zokuhambisa zisasazekile, kunye nolwabiwo lwamanani, ukugcinwa kunye nolawulo kunzima kakhulu; abasebenzisi abanakho ukukhetha ngokukhululekileyo abaSebenzisi abalulungelanga ukhuphiswano lwabasebenzisi abaninzi, kwaye umdla wabasebenzisi awunakuqinisekiswa ngokufanelekileyo; ukusetyenziswa kwezixhobo zenethiwekhi kunye namazibuko okungena kuphantsi. Ukuba ubeko lokwenyani lwenethiwekhi ye-passive optical (PON) kwikota yokuhlala yamkelwe, izixhobo ezikhoyo zeekhebula ezibonakalayo zinokuhlangabezana neemfuno. Igumbi lekhompyuter labahlali linentambo efanayo, ekulula kakhulu ukuyabela, ukugcina nokulawula amanani. Abasebenzisi banokukhetha ngokukhululekileyo umqhubi, ophucula kakhulu ukusetyenziswa kwezixhobo zezibuko, kodwa kwangaxeshanye azilahle izibonelelo ezibini eziphambili ze-PON njengothungelwano lokugcina kunye nokugcina izixhobo zefayibha ye-fiber optic. Okwangoku, kufuneka inyamezele ukungalungi kwexabiso lezixhobo ze-PON eziphezulu kunye nolwakhiwo olunzima lwenethiwekhi.
2) Ukukhetha itekhnoloji yokufikelela ye-FTTH kuluntu oluhlala kwilizwe lam-Point-to-point (P2P) yokufikelela kwitekhnoloji ye-Active Optical Network (AON) kwiindawo zokuhlala
Ngokucacileyo, izibonelelo zePON ziyanyamalala kwiindawo zokuhlala ezixineneyo. Njengoko itekhnoloji ye-PON yangoku ingakhuli kakhulu kwaye ixabiso lezixhobo lihlala liphezulu, sikholelwa ekubeni isayensi inokwenzeka ngakumbi kwaye kunokwenzeka ukuba ikhethe itekhnoloji ye-AON yokufikelela kwi-FTTH, kuba:
Amagumbi eekhompyuter ngokubanzi amiselwe kwindawo yokuhlala;
Itekhnoloji ye-P2P ye-AON ikhulile kwaye inexabiso eliphantsi. Inokubonelela ngokulula nge-100M okanye kwi-bandwidth ye-1G kwaye ibone ikhonkco elingenamthungo kunye neenethiwekhi ezikhoyo zekhompyuter;
-Akukho sidingo sokwandisa ukubekwa kweentambo ezibonakalayo ukusuka kwigumbi eliphakathi lomatshini ukuya kwindawo yokuhlala;
Ulwakhiwo lwenethiwekhi elula, ulwakhiwo olusezantsi kunye nokusebenza kunye neendleko zokugcina;
Ukufakelwa kweentambo ngaphakathi kwigumbi lekhompyuter yoluntu, kulula ukunika amanani, ukugcina nokulawula;
-Vumela abasebenzisi ukuba bakhethe ngokukhululekileyo abasebenza, okulungele ukhuphiswano lwabasebenzisi abaninzi, kwaye umdla wabasebenzisi unokukhuseleka ngokufanelekileyo kukhuphiswano;
Umgangatho wokusetyenziswa kwezixhobo zibuko liphezulu kakhulu, kwaye amandla anokunyuswa ngokuthe ngcembe ngokwanda kwenani labasebenzisi.
Isakhiwo senethiwekhi esekwe kwi-AON esekwe kwi-FTTH. Intambo ekhoyo esembindini wefibre optic isetyenziswa ukusuka kwigumbi lekhompyuter lomqhubi wefowuni ukuya kwigumbi lekhompyuter loluntu. Inkqubo yokutshintsha ibekwe kwigumbi lekhompyuter loluntu, kwaye inqaku lokukhomba (P2P) imowudi yenethiwekhi yamkelwe kwigumbi lekhompyuter yoluntu ukuya kwisiphelo somsebenzisi. Izixhobo ezingenayo kunye neepaneli zokubamba zibekwe ngokufanayo kwigumbi lekhompyuter loluntu, kwaye yonke inethiwekhi yamkela umthetho olandelwayo we-Ethernet ngobuchwephesha obuvuthiweyo kunye neendleko eziphantsi. Inethiwekhi ye-AON yenqaku-ukuya-kwinqanaba le-FTTH okwangoku itekhnoloji yokufikelela ye-FTTH esetyenziswa kakhulu eJapan naseMelika. Phakathi kwabasebenzisi be-FTTH abazizigidi ezi-5 ezikhoyo ngoku, ngaphezulu kwama-95% basebenzisa itekhnoloji ye-P2P esebenzayo. Izibonelelo zayo ezibalaseleyo zezi:
Ububanzi bebhendi ephezulu: kulula ukuyifumana indlela ezinzileyo yokufikelela kwi-100M;
-Iyakwazi ukuxhasa ukufikelela kwi-intanethi kwi-intanethi, ukufikelela kwi-CATV kunye nokufikelela kwifowuni, kunye nokuqonda ukudityaniswa kweenethiwekhi ezintathu kuthungelwano lokufikelela;
UpXhasa ishishini elitsha elibonakalayo kwikamva: i-videophone, i-VOD, i-cinema yedijithali, iofisi ekude, umboniso okwi-intanethi, imfundo yeTV, unyango olukude, ukugcinwa kwedatha kunye nokugcinwa kwemali, njl.
Ulwakhiwo lwenethiwekhi olulula, itekhnoloji evuthiweyo kunye neendleko zokufikelela eziphantsi;
Igumbi leekhompyuter kuphela yindawo esebenzayo. Ukubeka ngaphakathi iingcingo zombane kwigumbi lekhompyuter ukunciphisa iindleko zolondolozo kunye nokuphucula ukusetyenziswa kwezixhobo zamazibuko;
-Vumela abasebenzisi ukuba bazikhethele ngokukhululekileyo abasebenzisi, nto leyo ebangela ukuba kubekho ukhuphiswano phakathi kwabasebenzisi be-telecom;
-Ukugcina ngokufanelekileyo izixhobo zefayibha ye-fiber optic ukusuka kwigumbi lekhompyuter ukuya eluntwini, kwaye akukho sidingo sokwandisa ukubekwa kweentambo zefiber optic ukusuka kwigumbi lekhompyuter ukuya kuluntu.
Siyakholelwa ekubeni isayensi inokwenzeka ngakumbi kwaye kunokwenzeka ukuba ikhethe itekhnoloji ye-AON yokufikelela kwi-FTTH, ngenxa yokungaqiniseki kuphuhliso lwemigangatho ye-PON kunye neetekhnoloji:
-Umgangatho uvele nje, eneenguqulelo ezininzi (i-EPON & GPON), kwaye ukhuphiswano lwemigangatho aluqinisekanga malunga nokunyuswa kwexesha elizayo.
DevicesIzixhobo ezifanelekileyo zifuna iminyaka emi-3-5 yokubekwa emgangathweni kunye nokukhula. Kuya kuba nzima ukukhuphisana nezixhobo ezikhoyo ze-Ethernet P2P ngokweendleko kunye nokuthandwa kwiminyaka emi-3-5 ezayo.
-Izixhobo ze-optoelectronic zibiza kakhulu: amandla amakhulu, ukuhanjiswa ngesantya esiphezulu kunye nolwamkelo; izixhobo zangoku zombane zikude ekubeni zikwazi ukuhlangabezana neemfuno zokuvelisa iinkqubo ze-PON zexabiso eliphantsi.
Okwangoku, ixabiso lokuthengisa eliphakathi kwizixhobo zangaphandle ze-EPON zii-1,000-1,500 zeedola zaseMelika.
3. Nika ingqalelo kwimingcipheko yetekhnoloji ye-FTTH kwaye uphephe ukungaceli ngokungacacanga inkxaso yokufikelela kwinkonzo epheleleyo
Abasebenzisi abaninzi bafuna i-FTTH ukuxhasa zonke iinkonzo, kwaye ngaxeshanye baxhase ufikelelo kwi-broadband ye-Intanethi, intambo ye-TV (CATV) kunye nokufikelela komnxeba ngokusisigxina, oko kukuthi, ukufikelela kumdlalo ophindwe kathathu, ngethemba lokufumana itekhnoloji yokufikelela ye-FTTH kwinyathelo elinye. Sikholelwa ekubeni kufanelekile ukuba sikwazi ukuxhasa ukufikelela kwi-intanethi kwi-intanethi, ukufikelela kumda kamabonakude (CATV) kunye nokufikelela kweefowuni ezisisigxina, kodwa eneneni kukho umngcipheko omkhulu wobuchwephesha.
Okwangoku, phakathi kwezigidi ezi-5 zabasebenzisi be-FTTH emhlabeni, ngaphezulu kwe-97% ye-FTTH yokufikelela kuthungelwano lubonelela kuphela ngeenkonzo zokufikelela kwi-intanethi, kuba iindleko ze-FTTH ukubonelela ngomnxeba osisigxina wesintu uphezulu kakhulu kunexabiso lobuchwephesha obukhoyo, kunye nokusetyenziswa kwefiber ebonakalayo ukuhambisa isiko eliqhelekileyo Umnxeba nawo unengxaki yokubonelelwa ngombane. Nangona i-AON, i-EPON kunye ne-GPON zonke zixhasa ukufikelela kumdlalo wokudlala kathathu. Nangona kunjalo, imigangatho ye-EPON kunye ne-GPON isandula ukwaziswa, kwaye kuya kuthatha ixesha ukuba iteknoloji ikhule. Ukhuphiswano phakathi kwe-EPON kunye ne-GPON kunye nokunyuselwa kwexesha elizayo kwale migangatho mibini nako akuqinisekanga, kwaye inqaku layo lokuya kuthi ga kwi-multipoint yokwenziwa kwenethiwekhi alulungelanga uxinano oluphezulu lwase China. Izicelo zendawo yokuhlala. Ngaphaya koko, izixhobo ezinxulumene ne-EPON kunye ne-GPON zifuna ubuncinci iminyaka emi-5 yokumiselwa kunye nokukhula. Kwiminyaka emi-5 ezayo, kuya kuba nzima ukukhuphisana nezixhobo ezikhoyo ze-Ethernet P2P ngokweendleko kunye nokuthandwa. Okwangoku, izixhobo ze-elektroniki ze-opto zikude ekubeni zikwazi ukuhlangabezana neemfuno zemveliso ezisezantsi. Iindleko zePON iimfuno zenkqubo. Kuyabonakala ukuba ukusukela okungaboniyo kokufikelela ngokupheleleyo kwe-FTTH kusetyenziswa i-EPON okanye i-GPON kweli nqanaba kuya kuzisa umngcipheko omkhulu kubuchwephesha.
Kwinethiwekhi yokufikelela, yinto engenakuphepheka yefayibha ebonakalayo ukubuyisela iintambo ezahlukeneyo zobhedu. Nangona kunjalo, ifayibha enombala iya kutshintsha indawo yeentambo zobhedu ubusuku bonke. Akunakwenzeka kwaye akucingeki ukuba zonke iinkonzo zifikeleleke kwiifayili ze-optical. Nayiphi na inkqubela phambili kwezobuchwepheshe kunye nokusetyenziswa kuhamba ngokuthe ngcembe, kwaye i-FTTH ayikho ngaphandle. Ke ngoko, kuphuhliso lokuqala kunye nokukhuthazwa kwe-FTTH, ukubakho kwefayibha ebonakalayo kunye nentambo yobhedu ayinakuphepheka. Ukuhlalisana kwefayibha ebonakalayo kunye nekhebula lobhedu kunokwenza ukuba abasebenzisi kunye nabaqhubi beefowuni banqande ngokufanelekileyo umngcipheko wobuchwephesha be-FTTH. Okokuqala, iteknoloji yokufikelela ye-AON inokusetyenziswa kwinqanaba lokuqala ukufezekisa ukufikelela kwe-FTTH ye-Broadband ngexabiso eliphantsi, ngelixa i-CATV kunye neefowuni ezizinzileyo zemveli zisasebenzisa ukufikelela ngokudibeneyo kunye nokujija. Kwiindawo zokuhlala, ukufikelela kwi-CATV kunokufezekiswa ngaxeshanye ngokusebenzisa ifayibha ebonakalayo ngexabiso eliphantsi. Okwesibini, kukho imiqobo kushishino ekuboneleleni ngeenkonzo zonxibelelwano eTshayina. Abaqhubi beTelecom abavumelekanga ukuba basebenzise iinkonzo zeCATV. Ngokuchasene noko, abaqhubi beCATV abavumelekanga ukuba basebenzise iinkonzo zemveli zonxibelelwano (ezinje ngomnxeba), kwaye le meko iya kuba lixesha elide kwixesha elizayo. Ixesha alinakuguqulwa, ke umqhubi omnye akanakho ukubonelela ngeenkonzo zokudlala kathathu kwinethiwekhi yokufikelela ye-FTTH; kwakhona, kuba ubomi beentambo ezibonakalayo bunokufikelela kwiminyaka engama-40, ngelixa iintambo zobhedu zihlala ziyiminyaka eli-10, xa iintambo zobhedu zibangelwa bubomi Xa umgangatho wonxibelelwano uyehla, akukho mfuneko yokubeka naziphi na iintambo. Kufuneka uphucule kuphela izixhobo zefiber optic ukubonelela ngeenkonzo ezinikezelwa ziintambo zokuqala zobhedu. Ngapha koko, okoko nje itekhnoloji ikhulile kwaye iindleko zamkelekile, unokuhlaziya nangaliphi na ixesha. Izixhobo ifayibha Optical, ngexesha ukonwabela lula kunye bandwidth eliphezulu ziziswe iteknoloji entsha FTTH.
Ukushwankathela, ukhetho lwangoku lwefayibha ebonakalayo kunye nobhedu lokuhlangana, usebenzisa i-AON's FiberP2P FTTH ukufezekisa ukufikelela kwe-intanethi kwi-intanethi, i-CATV kunye neefowuni ezizinzileyo zemveli zisasebenzisa ukufikelela ngokudibeneyo kunye nokujija, okunokuphepha umngcipheko wetekhnoloji ye-FTTH ngaxeshanye ixesha, onwabele lula kunye bandwidth eliphezulu aziswe yi-FTTH ukufikelela kwitekhnoloji entsha ngokukhawuleza. Xa iteknoloji ivuthiwe kwaye indleko yamkelekile, kwaye nezithintelo zeshishini zishenxisiwe, izixhobo zefiber optic zinokuhlaziywa nangaliphi na ixesha ukufezekisa ukufikelela kweFTTH ngokupheleleyo kwinkonzo.
Umthumeli weXfp, Imodyuli yeFiber Optical, Ukudluliselwa kweModyuli yangaphandle, Ixabiso leHuawei Olt, IHuawei Qsfp +, I-Sfp C ++,